SomaliTalk.com » Nabadey Saalax Xaashi Carab (1955 – 2010): Qudbi-suugaaneed Kaloo Galbaday | Maxamed Daahir Afrax
Geeridaas ololaha ku qaadday rug-caddaagii fanka iyo suugaanta Soomaalida waxaan iyana ka nabad galin da’da soo koraysa ee la quuddarraynayey inay buuxin doonaan kaalinta ay banneeyaan kolba inta waqtigoodu dhammaado. Tusaale waxaa ah geeridii lama-filaanka ahyd ee dhawaan meel Burco u dhow shil baabuur ku gaadday Nuura Maxamed Cali oo ahayd ubax qaali ah oo u hillaacay halabuurka Soomaalida (Dheeg suugaanteeda ka mid ah ka eeg Wargeyska Halabuur Vol.3, 1&2, Pp. 85 – 86).
Taariikhdiisa shaqada, Saalax shaqooyin dhawr ah iyo xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay Soomaaliya burburka ka hor. Shaqadiisii u horreysey wuxuu ka bilaabay ciidammadii badda ee Soomaaliya oo u ka ahaa sarkaal farsamayaqaan ah. Ka dibna wuxuu sannado badan ka shaqeeyey wasaaraddii Kalluumaysiga iyo Khayraadka Dadda oo uu ka qabtay masuuliyado agaasin ah. Markii uu imminka geeriyoonayeyna wuxuu macallin ka ahaa Machadka Fanka ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Muddadii u dhexaysey 1977 – 1991 ee uu u shaqaynayey Wasaaradda kalluumaysiga iyo ciidammada badda, Saalax wuxuu isla waqtigaas isku hawlay diyaarinta qoraallo kala duwan. Tiro gaaraysa ilaa 7 buug ayuu qaarna qoray qaarna tarjumay. Badi waxay ahaayeen buugaag farsamo oo la xiriira xirfaddii uu ku soo takhasusay, sida qalabka war-isgaarsiinta, kalluumaysiga, nabadgelyada badda iwm.
Buuggani wuxuu qayb ka ahaa hawlgal ururin iyo darsid ah oo uu Saalax Xaashi ku foognaa muddo ka badan siddeed sannadood. Wuxuu isku mashquuliyey u fiirsiga Afsoomaaliga naxwihiisa iyo eray-saafkiisa. Waxaa uga dhex muuqday daldaloollo iyo qabyo badan. Wuxuu go’aansady inuu dajiyo hab ula muuqday in lagu qabya-tiri karo hannaankii qoraalka ee la dajiyey horraantii toddobaatannadii qarnigii hore. Hannaankaas oo wax ka beddelaya waxna ku biirinaya hiiggaaddii hore loo dajiyey ayuu ku dhaqan galiyey qaamuuskiisa cusub. Waxaa jirey dhawr dood-cilmiyeed oo lgu qabtay Jabuuti, kuwaas oo Saalax ka soo jeediyey fikradihiisa iyo hindiseyaashiisa cusub. Doodahaas, oo aan qaarkood qudhaydu ka qayb galay, waxaa jirey aqoonyahanno iyo waxgarad Saalax kula taliyey inuu dib u dhigo dhaqan-galinta hanaankiisa cusub ilaa laga galinayo doodo lagaga bogto, si wadajir ahna loogu go’aamiyo. Haseyeeshee Saalx taladaas muu qaadan ee wuu ku tallaabsaday inuu qaamuuska u hikaadiyo habkii isaga uga soo baxay cilmi-baaristii uu galay. Waxaa jira buug aan sida qaamuuska u weyneyn oo uu asagana ku soo bandhigayo darsiddiisii saafidda Afsoomaaliga (sarfi). Wuxuu dajiyey xeer cusub oo uu u bixiyey Xeerka Saafidda Eray-saleedka Afsoomaaliga. Halkan aqoonyahanku wuxuu soo kordhinayaa aqoon ugub ah oo looga baahna diraasaadka Afsoomaaliga. Nasiibdarro buuggan oo aan weli si buuxda u faafin ayay qoraaga jashu haleeshay. Waxaa loo bahan yahay in la faafiyo, laga faai’daysto, lana galiyo dood cusub oo ay ka soo baxaan dadaallo intaan ka sii hodansan oo lagu kobciyo darsidda erayg-saafka Afsoomaaliga.
Lixdaan buug ee dambe afartooda kale waa Halabuur suugaaneed. Labada ugu waaweyn mid wuxuu qoraagu ku magacaabay Qaran-taab. Waa diiwaan xambaarsan maanso loo dhisay hab aan caadi ahayn. Waa malxamad gaaraysa in ka badan toban kun oo meeris. Arrimaha mu’allifku kaga hadlayana waxa halbowle u ah falsafad iyo taariikhda siyaasadeed ee Soomaalida. Waxaa hoggaaminaysa waddaniyad sare. Buugga kale ee weyn waa sheeko-hiddeeddii Arraweelo oo uu abwaanku ka sameeyey riwaayad uu halabuuray, asagoo la kaashanaya khayaalkiisa hodonka ah. Waxaa soo raaca laba buug oo iyaguna xambaarsan laba riwaayadood. Waxaa la kala yiraahdaa Wanqalkii Nabsiga iyo Siraha Jacaylka.